အပိုဆုကြေး PLN 3050 နှင့်အခမဲ့လှည့်ဖျား ၅၀၀ အထိ - \_ t
အပိုဆုအတွက် PLN 3050 အထိနှင့်အခမဲ့လှည့်ဖျား 500 အထိ
11 ဇန်နဝါရီလ, 2021
၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင်အွန်လိုင်းကာစီနိုလောင်းကစားသည်အပိုဆုကြေးနှင့်အခမဲ့လှည့်ဖျားအသစ်များကိုတင်ပြသည်။ Betsson သည်အလွန်ကောင်းသောမြှင့်တင်မှုကိုတင်ပြသည် - သင်၏ပထမဆုံးငွေသွင်းမှုတွင် ၁၀၀% ရရှိသည်။ အပိုဆုအတွက် PLN 2021 အထိနှင့်အခမဲ့လှည့်ဖျား 100 အထိ။
လောင်းကစားရုံအပိုဆုနှင့်အခမဲ့လှည့်ဖျား ၅၀၀ ကိုမည်သို့ရနိုင်မည်နည်း။
1. Betsson နှင့်အကောင့်ဖွင့်ပါ
၂။ `ငွေသွင်းရန်ပြုလုပ်ပါ button ခလုတ်ကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့်ငွေသွင်းပါ
3. Betsson သည်သင်၏အပ်ငွေကိုနှစ်ဆတိုးပြီးသင်၏သိုက် ၁၀၀% ကိုကာစီနိုဆုကြေးအဖြစ် PLN 100 အထိထည့်ပါလိမ့်မည်
၄ ။ သင်သည် Grand Spinn Superpot တွင်အခမဲ့လှည့်ဖျား ၅၀၀ နှင့် Live Casino တွင် PLN4အပိုဆုကြေးရရှိလိမ့်မည်
၃။ ကမ်းလှမ်းချက်၏အကျိုးကျေးဇူးကိုရယူရန်ကစားသမားသည် ၁၀၀% ကြိုဆိုသည့်ကမ်းလှမ်းချက်ကိုငွေစုမှကောက်ယူပြီးအနည်းဆုံး PLN ၅၀ သွင်းရမည်။
၄။ ကစားသမားအားပေးမည့်အပိုဆုကြေးမှာ PLN ၃၀၀၀ အထိဖြစ်နိုင်သည်။ အပိုဆုကြေးကိုငွေဖြည့်ပမာဏထဲသို့ထည့်မည်။
၅ ။ Welcome Offer Bonus ၏ ၀ ယ်လိုအားလိုအပ်ချက်များသည် ၁၀ ရက်အတွင်းမပြည့်စုံပါက၊ အပိုဆုနှင့်အနိုင်ရလဒ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးမည်။
၆။ အပ်နှံငွေကိုကာစီနိုတွင်သာလောင်းနိုင်သည်။ တိုက်ရိုက်ကာစီနိုလောင်းကစားများသည်အလောင်းအစားလုပ်ခြင်းအတွက်မလိုအပ်ပါ။
၇။ ကစားသမားတစ် ဦး သည်၎င်းတို့၏အကောင့်တွင်ငွေနှင့်အပိုဆုကြေးများရှိပါကအစစ်အမှန်ငွေကိုအရင်သုံးပါလိမ့်မည်။ O Spilleautomater: 7%
၈။ ကစားသမားတစ် ဦး သည်သူတို့၏အပိုဆုကိုဖျက်သိမ်းပါကအပိုဆုကြေးနှင့်၎င်းမှရရှိသောမည်သည့်နိုင်ငွေကိုမဆိုဆုံးရှုံးလိမ့်မည်။